Toca Boca mandefa Toca Hair Salon 3 | Vaovao IPhone
Toca Boca dia mandefa Toca Hair Salon 3
Toca Boca dia iray amin'ireo mpamorona lalao mahomby indrindra ho an'ny ankizy ao amin'ny App Store. Ny fangatahana rehetra dia natao ho an'ny ankizy eo anelanelan'ny 0 sy 11 taona. Tao amin'ny iPhone News dia efa nampahafantarinay anao tamin'ny fotoana maro momba ny sasany amin'ny lalaon'izy ireo, indrindra rehefa azo alaina maimaim-poana izy ireo, satria misy ny lalao rehetra avy amin'ity mpamorona ityamin'ny karazana dokam-barotra na fividianana fampiharana mba tsy hanelingelina ny sain'ny ankizy kely. Ny vidin'ny lalao dia 2,99 euro, ny vidiny mitovy amin'ny lalao rehetra izay hita ao amin'ny Apple's application.
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Toca Boca dia namoaka ny andiany fahatelo an'ny Toca Hair Salon, nahatratra ny kinova fahatelo. Toy ny kinova taloha, miaraka amin'ny Kitiho ny Hair Salon 3 ireo ankizy kely eo anelanelan'ny 9 sy 11 taona (taona nanaovana ity lalao ity), azonao atao ny manety volombava, manana volo, manao fehiloha samy hafa karazana, ankoatry ny fikolokoloana volo, manitsy azy, manofahofa azy ... Ity lalao ity dia mitentina 2,99 euro.
Endri-javatra ny Toca Hair Salon 3
Tarehin-tsoratra vaovao miaraka amin'ny taovolo am-polony ho an'ny vao manomboka.
Volo mahitsy, matevina, olioly ary kinky ihany koa ankehitriny.
Ireo fitaovana ilaina rehetra hamoronana taovolo tadiavinao.
Fitaovana vaovao hanaovana randrana.
Ny endri-tsoratra rehetra dia afaka mampitombo volombava sy mampanjifa azy.
Fitaovana mandroso kokoa amin'ny fandokoana volo: alokaloka sy gradien amin'ny loko safidinao.
Azonao atao ny manova ny akanjon'ny toetranao.
Fitaovana vaovao am-polony: satroka, solomaso, firavaka ary maro hafa.
Ovao ny ambadika ao amin'ny kiosin-tsary.
Makà pikantsary amin'ny fampiharana ary zarao amin'ny namanao.
Estetika Unisex: Tsy toy ny ankamaroan'ny fangatahana fikoloana volo, ny ankizy rehetra dia asaina hilalao.
Tsy misy fe-potoana na isa ambony: milalao araka izay tianao.
Tsy misy doka avy amin'ny antoko fahatelo.
Toca Hair Salon 3€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Toca Boca dia mandefa Toca Hair Salon 3
Ny kojakoja Mac tsara indrindra hanome an'ity Krismasy ity
Apple te-hanolotra premieres sarimihetsika amin'ny iTunes